Markets and Cointop - Cryptocurrencies ကိုစောင့်ကြည့်ရန် GUI နှင့် CLI အက်ပလီကေးရှင်းများ Linux မှ
Markets and Cointop: Cryptocurrencies ကိုစောင့်ကြည့်ရန် GUI နှင့် CLI အက်ပလီကေးရှင်းများ
ဒီနေ့ငါတို့လယ်ကွင်းထဲပြန်ဝင်လိမ့်မယ် DeFi ကမ္ဘာ့ဖလား။ ထိုအကြောင်းကြောင့်, ကျနော်တို့အကြောင်းကို2စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အလွန်အသုံးဝင်သောစီမံကိန်းများကိုအကြောင်းပြောလိမ့်မယ် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းအက်ပ်များ။
လျှောက်လွှာ ၂ ခု Desktop (GUI) နှင့်တဦး Terminal (CLI) အတွက် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များ သူတို့အားအသည်းအသန်အသုံးပြုသူများအတွက်ဖန်တီးခဲ့သည် DeFi ကမ္ဘာ့ဖလားအထူးသဖြင့်ထိုနေ့ရက်သည် tradean (သူတို့ကုန်သွယ်) ကွဲပြားခြားနားသော Cryptocurrencies စီးပွားရေးအတွက်။ ထိုသူတို့ကိုခေါ်ကြသည် "စျေးကွက်များနှင့် Cointop".
Dash Core Wallet: Dash ပိုက်ဆံအိတ်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထို့ထက် ပို၍!
အထူးသဖြင့်သူတို့အတွက်အထူးအလေးထားသင့်သည် Linuxeros အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားသို့မဟုတ်အသည်းအသန် Cryptocurrencies, ထိုအမှု၌, သတိထားမိသို့မဟုတ်ပြန်သွားလိုသောမဟုတ်နှင့်ပတ်သက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်စာပေအချို့ပြန်လည်သုံးသပ် / မျှဝေပါ DeFi ကမ္ဘာ့ဖလားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသုံးဝင်သော link များကိုချန်ထားမည်။
"ဤတတိယနှင့်ယခုနောက်ဆုံးထုတ်ဝေချက်တွင် GNU / Linux ကို အခြေခံ၍ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော Operating Systems ပေါ်တွင် Installable Cryptocurrency Wallets အကြောင်းအဓိကအားဖြင့် "Dash Core Wallet" အကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်။ ။” Dash Core Wallet: Dash ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အခြားအရာများထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း။
"အခြေခံအားဖြင့် "Adamant" သည် blockchain နည်းပညာကို အခြေခံ၍ open source instant messaging application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ဖန် Crypto ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် Cryptocurrency Exchange Exchange System (Exchange) အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။"
"DeFi သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နည်းပညာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာမီကငွေကြေးကမ္ဘာပေါ်ရှိ blockchain နည်းပညာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ Cryptocurrencies မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေစနစ်များနှင့်ဘဏ္transactionsာရေးအရောင်းအ ၀ ယ်များပိုမိုလိုအပ်လာခြင်း၊ လုံခြုံပြီးသီးသန့်ဖြစ်သည်။"
1 Markets and Cointop: Desktop နှင့် Terminal မှ Cryptos
1.1.2 ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်စခရင်ရိုက်ကူးခြင်း
1.2 Cointop ဆိုတာဘာလဲ။
1.2.2 ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်စခရင်ရိုက်ကူးခြင်း
Markets and Cointop: Desktop နှင့် Terminal မှ Cryptos
အဆိုပါအညီ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် လျှောက်လွှာ၏, ကဖြစ်ပါသည်:
"စတော့ရှယ်ယာများ, ငွေကြေးနှင့် cryptocurrencies များအတွက် tracker အဖြစ်အလုပ်လုပ်သောလျှောက်လွှာ။"
ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းတွင်အခြေခံအားဖြင့်မည်သူမဆိုလိုအပ်သောဘဏ္dataာရေးအချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုရန်၊ စျေးကွက်နှင့်ရင်ပေါင်တန်းပြီးမည်သည့်အခါမျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးစေမည့်အောက်ပါလက္ခဏာများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။
ကြည့်ရှုရန်ဘဏ္financialာရေးပစ္စည်းများ (စတော့ရှယ်ယာများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ညွှန်းကိန်းများ)၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ (ငွေကြေး) နှင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ (cryptocurrencies) ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအစုစုကိုအလွယ်တကူ ဖန်တီး၍ ခြေရာခံနိုင်သည်။
Linux စမတ်ဖုန်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်း (Librem5, PinePhone)
အသေးစိတ်သိလိုပါက Yahoo Finance တွင်မည်သည့်သင်္ကေတကိုမဆိုဖွင့်ပါ။
ဖန်တီးအစုစုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ update ကိုအကြိမ်ရေညှိ။
ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်စခရင်ရိုက်ကူးခြင်း
စျေးကွက်များ စီမံကိန်းအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည် GNOME Circleဒါကြောင့်ကန ဦး ၌ရရှိနိုင်ပါသည် ".AppImage" format။ ဒါကြောင့်သူ၏လမ်း ဒေါင်းလုပ်နှင့်တပ်ဆင်ပါ အောက်ပါ command နှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မယ်:
ထို့နောက်သူကအလွယ်တကူမှတဆင့်ကွပ်မျက်နိုင်ပါတယ် Applications မီနူး နှင့် configure ပြသ / ဖယ်ရှားပစ်ရန်ပစ္စည်းများ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောနှင့်တိုက်ရိုက်မှတဆင့် ထိပ်ပိုင်းမီနူး.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက စျေးကွက်များ မင်းဆီကိုလည်ပတ်နိုင်တယ် GitHub အပေါ်က်ဘ်ဆိုက်.
အဆိုပါအညီ GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် လျှောက်လွှာ၏, ကဖြစ်ပါသည်:
"cryptocurrencies ကိုခြေရာခံဘို့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးအပြန်အလှန်အသုံးပြုသူ interface ကို (CLI) application ကို။"
ထို့ကြောင့်၊ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်အောက်ပါသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများရှိသည် - ၎င်းသည် terminal တစ်ခုပေါ်တွင် crypto market ကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်လုံးဝစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။
၎င်းသည် cryptocurrency စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးသည်။
၎င်းတွင်ဖော်ရွေသော htop-inspired interface တစ်ခုရှိပြီး vim-inspirot shortcut keys ရှိသည်။
ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါက, "Cointop" အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည် download လုပ်၍ unzipped လုပ်သော script တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အောက်ပါ command ဖြင့်တည်ရှိသည့် folder (path) မှသာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
ထို့နောက်သင်သည်သင်၏တွေ့မြင်နိုင်သည် CLI interface အလုပ်လုပ်နေတယ် ပြanyနာမရှိဘဲ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက "Cointop" မင်းဆီကိုလည်ပတ်နိုင်တယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုပြီးတိတိကျကျသည်သူ၏ စာရွက်စာတမ်းအပိုင်း.
မှတ်ချက်ဖြေ - ငါ့ရဲ့ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုက operating system အသုံးပြုသည် MilagrOS (Respin သည် MX Linux ကိုအခြေခံသည်) နောက်ဆုံး တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း 1.6.5 ၎င်းသည်ပြtoနာများကြောင့်ကွပ်မျက်ခြင်းမခံခဲ့ရပါ GLIBC_2.32 စာကြည့်တိုက်။ ကွပ်မျက်ခံရသောအခါ၎င်းသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမှားနှင့်ပစ်လိုက်သည် ယခင်ဗားရှင်း 1.5.4 ပြanyနာမရှိဘဲပြေးသွားတယ်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ GNOME Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်အဆိုပါ applet ကိုခေါ် မင်းသမီး, အခြားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြားရွေးချယ်စရာရှိနိုင်ပါသည် အဆိုပါ crypto စျေးကွက်စောင့်ကြည့်.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Markets y Cointop»,2စိတ်ဝင်စားဖို့အလွန်အသုံးဝင်သည် Desktop (GUI) နှင့် Terminal (CLI) အပလီကေးရှင်းများ သူတို့အားအသည်းအသန်အသုံးပြုသူများအတွက်ဖန်တီးခဲ့သည် DeFi ကမ္ဘာ့ဖလားအထူးသဖြင့်ထိုနေ့ရက်သည် tradean (သူတို့ကုန်သွယ်) ကွဲပြားခြားနားသော Cryptocurrencies စီးပွားရေးအရ၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Markets and Cointop: Cryptocurrencies ကိုစောင့်ကြည့်ရန် GUI နှင့် CLI အက်ပလီကေးရှင်းများ
နယူးယောက်ဥပဒေကြမ်းသည် Bitcoin သတ္တုတူးဖော်ရေးကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားရန်ရည်ရွယ်သည်